ဗိုလ်ချုပ် အစ်ကို ဦးအောင်သန်းပြောတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကလေးဘဝ - Apannpyay
Home > Uncategorized > ဗဟုသုတအစုံ > ဗိုလ်ချုပ် အစ်ကို ဦးအောင်သန်းပြောတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကလေးဘဝ
ကျွန်တော်သုံးနှစ် ခြောက်လငါးရက်သားအရွယ် ရောက်သောအခါ ညီကလေးတယောက်ရပါသည်။ ထို့နေ့ကို ကောင်းစွာမှတ်မိပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ခါတိုင်းည များတွင် မိခင်နှင့်အတူ အိပ်ရာထဲ၌ သေးပါလေ့ရှိပါသည် ထိုညတွင်ကား ဖခင်နှင့်အတူ အိပ်ရ၍ ဆီးသွားလိုသဖြင့် နိုးလာကာ ဖေဖေ သေးပေါက်ချင်တယ် ပာု ပြောရာ ဖခင်က ထပေါက် ပာု ပြန်ပြောပါသည်။ ထိုညမှစ၍ ကျွန်တော်သည် အိပ်ရာထဲ၌ သေးမပါတော့ပါ။ ဆီးသွားလိုက နိုးလာပါသည်။ မိုးလင်းသောအခါ ဘန်းကြီးထဲ၌ သိပ်ထားသော ညီကလေးကို မြင်၍ ကိုင်မည်ပြု ရာ အစ်ကိုကြီး (ဦးဘဝင်း) က ပော့.. မကိုင်နဲ့ လက်ပြတ်တတ်တယ်ပာု ပြောသဖြင့် မကိုင်ဘဲ ကျွန်တော့်လက်ကို ပြန်ဆုတ်လိုက်ပါသည်။
အစ်ကိုကြီးကား ပာက် ပာက် ပက်ပက် ရယ်ပစ်လိုက်ပါသည်။ သို့တစေလည်း ကျွန်တော်သည် ညီကလေး ကိုမကိုင်ရဲဘဲ ဘေးမှ လှည့်ပတ်၍ ကြည့်ရုံသာ ကြည့် ဝံ့ပါသည်။ ညီကလေး တစ်နှစ်အရွယ်ရောက်သောအခါ နာမည်ပေးရန်စဉ်းစားကြပါသည်။ ကျွန်တော်က ကျုပ် အောင်သန်းဆို သူက အောင်ဆန်းပေါ့ဗျာ့ ပာု ပြောလိုက်ရာ အားလုံးက လက်ခံကြပါသည်။ စနေသား ဖြစ်သည့်အတိုင်း ဇာတာထဲ၌ ထိန်လင်းပာု နေ့နာမ်အလိုက် မှည့်ထားသော်လည်း အောင်ဆန်းပာုသာ တွင်နေပါတော့သည်။ ထိန်လင်းသည် ဇာတာဖွဲ့သူပေးသောနာမည်မျှာသာ ဖြစ်သည်။ အချို့ ထင်နေသကဲ့သို့ ငယ်နာမည် မပာုတ်ပါ ။
မည်သည့်အခါမျှ ထိန်လင်းပာု မခေါ်ခဲ့ကြပါ။ ကျွန်တော်နှင့် အောင်ဆန်း မွေးဖွားခဲ့သော အိမ်ကြီးသည် မရှိတော့ပါ ။ ရှေးအိမ်ကြီးဖြစ်၍ ကျွန်တော်တို့ ဘေးလက်ထက်က တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ပာုပြောကြပါသည်။ ယခု နတ်မောက်၌ရှိသောအိမ်သည် အောင်ဆန်းမွေးပြီးနောက် နှစ်နှစ်လောက်ရှိမှ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သောအိမ်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ဘေးဦးရွှေနီသည် နတ်မောက်မြို့ သူကြီးဖြစ်၍ ကျွန်တော်တို့အဖိုးပာု ရေးသားပြောဆိုနေကြသော ဦးမင်းရောင် ခေါ် ရွှေလရောင်သည် ဘေးမကြီး မယ်စိုး၏ ၊ တူ ၊ အဖွား မယ်သူဇာ၏ မောင်တဝမ်းကွဲဖြစ်ပါသည် ။
ကျွန်တော်တို့ ဘေးဘိုးဘီဘင်များသည် အလောင်းဘုရား၏ ရဲဘော် ခြောက်ကျိပ်ရှစ် အပါအဝင် ဝင်းမင်းကြီး ဦးမြ(ဦးမြတ်) မှ ဆင်းသက်ကြသည်ပာု လူကြီးသူမများ ပြောဆိုသံ ကြားဘူးပါသည်။ အောင်ဆန်းသည် နာမည်နှင့်လိုက်အောင် ဆန်း သူဖြစ်ပါသည်။ အမေးအမြန်းထူ၍ လူကြီးတွေပြန်မဖြေနိုင်သည့် မေးခွန်းများကို မေးလေ့ ရှိပါသည် ၊ မိုးတွင်း ဆောင်းတွင်းပာု ခေါ်ကြသော်လည်း နွေရာသီကို အဘယ့် ကြောင့် နွေတွင်းပာု မခေါ်ကြသလဲပာု မေးရာ လူကြီးများသည် ပြန်၍ မဖြေနိုင်ဘဲ ရယ်နေကြရပါသည်။ ညီအစ်ကိုတဝမ်းကွဲ ရှိသည်လည်း ဘာကြောင့် လင်မယား တဝမ်းကွဲမရှိသလဲ မေးပြန်ရာ လူကြီးများသည် ယခင်က ကဲ့သို့ပင် ပြန်မဖြေနိုင်ဘဲ ရယ်နေကြရပါသည်။ အမေးအမြန်းထူသလောက် အောင်ဆန်းသည် စဉ်းစားတွေးတော ငေးမော နေတတ်ပါသည်။
အငယ်ဆုံးဖြစ်သည့်အတိုင်း မိဘနှစ်ပါးကသာမက အစ်ကို အစ်မများကပါ အလိုလိုက်ကြသည်ဖြစ်ရာ အောင်ဆန်းသည် ကလေးဆိုးကြီးကဲ့သို့ ဖြစ်နေပါသည်။ လိုချင်သည်ကို မရမနေ ငိုယို တောင်းဆိုတတ်ပါသည်။ ရလည်းရပါသည် ကြီးလာသည့်တိုင်အောင် မိမိပြောလိုရာ စွပ်၍ ပြောတတ်ခြင်း လုပ်လိုရာကို စွပ်လုပ်တတ်ခြင်းတို့သည် ငယ်စဉ်က အလိုလိုက်ခံခဲ့ရခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ပာု ထင်ပါသည်။ မှတ်ချက် ။ တချိန်က မိတ်ဆွေတယောက်က ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သုံးသပ်ကြည့်ကြတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ပာာ မိမိပြောလိုရာ လုပ်လိုရာကို စွပ်ပြော စွပ်လုပ်တတ်တယ် ။
ဒါပာာ… အသက် ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အာဏာရလို့ ရယ်လို့ သုံးသပ်မိကြတယ် ပာု.. ကျွန်တော်ကို ပြောပါသည်။ ကျွန်တော်က ဒါတင် မကဘူး ဗိုလ်ချုပ်ပာာ မွေးကထဲက အလိုလိုက်ခံခဲ့ရတယ် ပြောရာ ထိုမိတ်ဆွေက ကျွန်တော်တို့ အဲဒါကို သိလဲမသိခဲ့ဘူး။ ထည့်လဲမသုံးသပ်မိခဲ့ဘူး ပာု ပြန်ပြောပါသည်။ စိတ်ဘက်ဆိုင်ရာ ပါရဂူများ၏အဆိုအရ လူတယောက်၏ စိတ်ဓာတ်သည် မိမိ၏ ဘဝပေးအတိုင်း ဖြစ်တတ်သည်။ ဥပမာ လူတယောက်သည် ငယ်စဉ်က ဆိုးသောမိဘများ၏ နှိပ်စက်ခြင်းကိုသော် ၄င်း အခြားသူများ၏ နှိပ်စက်ခြင်းကိုသော် ၄င်း ခံခဲ့ရလျှင် ကြီးလာသောအခါ မယုံသင်္ကာဖြစ်တတ်ခြင်း ကြောက်ရွံ့ တတ်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါသည်။
တနည်းအားဖြင့် ဆိုလျှင် ထိုပုဂ္ဂိုလ် မျိုးတွင် အရူံးပေးတတ်သော စိတ်ဓာတ် မျိုးဝင်နေတတ် ပါသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည် မိမိနိုင်လှည့်ကြုံလာသောအခါ ရက်ရက်စက်စက် ပြုကျင့်တတ်သည် ငယ်စဉ်က အလိုလိုက်ခံခဲ့ရပြီး မိမိလုပ်လိုရာ လုပ်ခွင့်ရခဲ့လျှင် ကြီးပြင်းလာသည့်အခါ မိမိလုပ်ချင်သည့်အတိုင်း လုပ် ဝံ့သည်။ လုပ်တတ်သည် တနည်းအား ဖြင့်ဆိုလျှင် ထို ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွင် မိမိကိုယ် မိမိ ယုံကြည့်ကိုးစားမူ ရှိတတ်သည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည် ရန်သူကို အထင်သေးတတ်သဖြင့် နောက်ဆုံး၌ မိမိပင် ခံရတတ်သည်။ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ၏ စိတ်နေသဘောထားနှင့် ပတ်သက်၍ သုံးသပ်လိုပါက ကလေးဘဝက နေထိုင်ခဲ့ရပုံကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားလျှင် မမှားနိုင်ပာု ကျွန်တော်ယုံကြည့်ပါသည်။ အလိုလိုက်ခံရသော်လည်း အောင်ဆန်းမှာ မတရားလုပ်ချင်သည့်စိတ် မတရားအခွင့်အရေး လိုချင်သည့်စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိပါ ။
မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ယုံကြည်သူဖြစ်သည့်အတိုင်း သူများအား မနာလိုသည့်စိတ် မရှိပါ မိမိထက် ကြောသွားမည်ကို စိုးသည့်အတွက် သူများအား ခြေထိုးလိုသည့် စိတ်မျိုးလည်း အလျဉ်းမရှိပါ အောင်ဆန်းနှင့် အချို့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များ ကွာခြားခြင်းသည် ထိုစိတ်ဓာတ် အခြေခံကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်ပာု ကျွန်တော်ထင်ပါသည်။ အောင်ဆန်းသည် အလွန်ရိုးသား၍ စားချင်လျှင် စားချင်သည်။ လိုချင်လျှင် လိုချင်သည်။ ကြောက်လျှင် ကြောက်သည်စသည်ဖြင့် ဖွင့်ပာဝန်ခံတတ်ပါသည်။ မည့်သည့်အခါမှ လိမ်မပြောတတ်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်က နတ်မောက်ဆွမ်းကြီးလောင်းအသင်းက ကြီးမူး၍ ဝါတွင်း၌ အပတ်စဉ် အိုစည်ဗုံမောင်းဖြင့် အလှူခံထွက်ပါသည်။ လူတယောက်က ဖိုးသူတော်အရုပ်ကြီးထဲ ဝင်ပြီး ကပါသည် ထိုအရုပ်ကြီးကို အောင်ဆန်း အလွန်ကြောက်ပါသည် ။
အရုပ်ကို ကြောက်ရကောင်းလား ပာု… ဖခင်က ဆူပူပြစ်တင်သောအခါ ဖင်ခေါင်းထဲသွင်းထား ဘယ့်နဲ့လုပ်မလဲဗျာ့ပာု ပြန်ဖြေပါသည်။ ခေါင်းတုန်တုန် လည်တုန်တုန် ဖြစ်နေသော မယ်ရွှေမယ်ဆိုသည့် အမယ်ကြီးကိုလည်း သူကြောက်၍ ကြောက်ကြောင်းကိုလည်း သူဝန်ခံပါသည်။ ညအိပ်လျှင် မိခင်ကို ဖက်အိပ်လေ့ရှိ၍ မိခင်ကို သူဘက်သို့ အမြဲလှည့်အိပ်စေချင်သည်။ အိမ်နားရှိ ကာကာ ဆိုင်သို့လည်း သူမသွားရဲပါ။ တနေ၌ ကာကာ ဆိုင်သို့သွား၍ ဘီ- ဒီ ဆေးလိပ်များဝယ်ပြီးလျှင် ချိုးကြည့်ပါသည်။ မိခင်သိသောအခါ ကလေးအား ဆေးလိပ်ရောင်းလိုက်သော (ကုလား) ထံ သွား၍ ဆူပူပြစ်တင်ပါသည်။
ဆိုင်ရှင် ကာကာ က မိခင်ကိုတောင်းပန်၍ အောင်ဆန်းဘက်လှည့်ကာ နောက်တခါလာရင် ဘန်ဘူးပေးမယ် ပာု ပြောလိုက်ရာ အောင်ဆန်းက ဘန်ဘူးပေးမယ်ဆိုတာ ဘာလဲ ပာု မိခင်ကို မေးပါသည်။ မိခင်က ဘန်ဘူးပေးမယ်ဆိုတာ ရိုက်မယ်လို့ပြောတာ ပာု ပြောလိုက်ရာ အောင်ဆန်းသည် ထိုနေ့မှစ၍ ကာကာ ဆိုင်သို့ မသွားတော့ပေ ။
နေမကောင်းလျှင် ပိုက်ဆံပေးမှ ဆေးသောက်မည်ပာု အကြပ်ကိုင်တတ်သဖြင့် အောင်ဆန်းသည် နေမကောင်းတိုင်း မိခင်ထံမှ ငွေဒင်္ဂါး လေး ငါးဆယ် ရပါသည် (ထိုခေတ်က ငွေစက္ကူ ပေါ်သေးပာန်မတူပါ နတ်မောက်၌ တဆိုင်တည်းသာရှိသော ကာကာ ဆိုင်သို့ မသွားရဲသဖြင့်သူလိုချင်သည့် ပစ္စည်းများကို ကျွန်တော်က ဝယ်ပေးရပါသည် ကျွန်တော်လိုချင်သည့်တို့ကိုလည်း သူငွေဖြင့်ပင် ဝယ်ခွင့်ပေးပါသည်။ ညီအစ်ကိုရန်ဖြစ်သောအခါ သူငွေ ပြန်ပေးရန် တောင်းတတ်ပါသည်။ မိခင်က မင်း အစက ဘာလို့ ပေးသလဲ ပာု မေးသောအခါ …. အို…. သူက ညီအကိုချင်းဘဲကွာ ဘာ ညာ နဲ့ ပြောတာကိုးဗျာ့ပာု ပြန်ဖြေသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ရယ်ကြရပါသည် ။
အောင်ဆန်းသည် မည်သည့်အခါမှ လုပ်ကြံ၍ လည်ဆည်၍ မပြောတတ်ပါ ပေးခဲ့လျှင် ပေးခဲ့သည် လုပ်ခဲ့လျှင် လုပ်ခဲ့သည်ပာု ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖွင့်ပာဝန်ခံတတ်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ မိခင်သည် အလွန် ပညာလိုလားရကား ကျွန်တော်တို့ ငါးနှစ်ခြောက်နှစ်အရွယ် ရောက်လျှင် ကျောင်းထားပါသည်။ အောင်ဆန်းသည် ကျောင်းနေရမှာ ကြောက်သဖြင့် အမနေမှ နေမယ်ပာု မိခင်ကို ပြောပါသည်။ (ကျွန်တော်တို့မိခင်ကို ကျွန်တော်တို့က အမ ပာု ခေါ်ကြပါသည်) ထွေးဆုံးသားကလေးကို အလွန်ချစ်ခင်သော မိခင်ကလည်း အောင်ဆန်းကို ကျောင်းမပို့ ရက်ဘဲ ခွင့်လွတ်ထားရပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ၁၁နှစ်သားအရွယ်ေ၇ာက်သောအခါ ရှင်ပြု၍ ကိုရင် ဝတ်ပါသည်။ ခုနှစ်နှစ်ကျော် ရှစ်နှစ်သားရှိနေပြီဖြစ်သော အောင်ဆန်းသည် ကျောင်းမနေသေးသော်လည်း ကျွန်တော်ထံ နေ့စဉ်လာပါသည်။ ထို့သိုလာရင်း ကိုရင် ဝတ်ချင်စိတ်ပေါက်လာသဖြင့် ကိုရင်ဝတ်ပေးရန် မိခင်ကို ပူဆာပါသည် ချက်ကောင်းကိုယူတတ်သော မိခင်က ကိုရင်ဝတ်တယ်ဆိုတာ လွယ်တာ မပာုတ်ဖူးကွ ၊ စာတတ်မှ ဝတ်လို့ ရတာ မင်းလို စာမတတ်တဲ့လူက ကိုရင်ဝတ်လို့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ ပာု ဆွ ပေးလိုက်ပါသည် ။ ဒီလိုလား ၊ ဒီလိုဆို ကျောင်းနေမယ် ပာု ပြောပြီး အောင်ဆန်းသည် ထိုအချိန်မှစ၍ ကျောင်းနေပါတော့သည် ။ (မှတ်ချက် ။ ၁၉၃၂ – ၃၃ ခုကောလိပ်ကျောင်းရောက်စ ပထမနှစ် ၌ လည်း အောင်ဆန်းသည် သင်္ကန်းဝတ်၍ အီတာလီယံ ဘုန်းတော်ကြီး ဦးလောကနထနှင့်အတူလိုက်ကာ သာသနာပြုလိုစိတ် ဖြစ်ပေါ် လာသဖြင့် မိခင်ထံ ခွင့်တောင်းဘူးပါသည် မိခင်က ခွင့်မပြုသဖြင့် မလိုက်ဖြစ်ခဲ့ပေ) ဤ သို့ဖြင့် အောင်ဆန်းသည် နတ်မောက် ရှိ ဒီပင်္ကရာကျောင်းခေါ် ဦးသောဘိတကျောင်းသားဖြစ်လာပါသည် ဦးသောဘိတကျောင်းသည် ဘုန်းကြီးကျောင်းဖြစ်သော်လည်း အတန်းကျောင်းဖြစ်ပါသည် ထိုခေတ်က ထိုကျောင်းမျိုးကို လောကဓာတ်ကျောင်းပာု ခေါ် ကြပါသည် ။
အောင်သန်း၏ အောင်ဆန်း စာအုပ်မှ ။
ဗိုလျခြုပျ အဈကို ဦးအောငျသနျးပွောတဲ့ ဗိုလျခြုပျအောငျဆနျး ကလေးဘဝ
ကြှနျတျောသုံးနှဈ ခွောကျလငါးရကျသားအရှယျ ရောကျသောအခါ ညီကလေးတယောကျရပါသညျ။ ထို့နကေို့ ကောငျးစှာမှတျမိပါသညျ။ ကြှနျတျောသညျ ခါတိုငျးည မြားတှငျ မိခငျနှငျ့အတူ အိပျရာထဲ၌ သေးပါလရှေိ့ပါသညျ ထိုညတှငျကား ဖခငျနှငျ့အတူ အိပျရ၍ ဆီးသှားလိုသဖွငျ့ နိုးလာကာ ဖဖေေ သေးပေါကျခငျြတယျ ပာု ပွောရာ ဖခငျက ထပေါကျ ပာု ပွနျပွောပါသညျ။ ထိုညမှစ၍ ကြှနျတျောသညျ အိပျရာထဲ၌ သေးမပါတော့ပါ။ ဆီးသှားလိုက နိုးလာပါသညျ။ မိုးလငျးသောအခါ ဘနျးကွီးထဲ၌ သိပျထားသော ညီကလေးကို မွငျ၍ ကိုငျမညျပွု ရာ အဈကိုကွီး (ဦးဘဝငျး) က ပော့.. မကိုငျနဲ့ လကျပွတျတတျတယျပာု ပွောသဖွငျ့ မကိုငျဘဲ ကြှနျတေျာ့လကျကို ပွနျဆုတျလိုကျပါသညျ။
အဈကိုကွီးကား ပာကျ ပာကျ ပကျပကျ ရယျပဈလိုကျပါသညျ။ သို့တစလေညျး ကြှနျတျောသညျ ညီကလေး ကိုမကိုငျရဲဘဲ ဘေးမှ လှညျ့ပတျ၍ ကွညျ့ရုံသာ ကွညျ့ ဝံ့ပါသညျ။ ညီကလေး တဈနှဈအရှယျရောကျသောအခါ နာမညျပေးရနျစဉျးစားကွပါသညျ။ ကြှနျတျောက ကြုပျ အောငျသနျးဆို သူက အောငျဆနျးပေါ့ဗြာ့ ပာု ပွောလိုကျရာ အားလုံးက လကျခံကွပါသညျ။ စနသေား ဖွဈသညျ့အတိုငျး ဇာတာထဲ၌ ထိနျလငျးပာု နနေ့ာမျအလိုကျ မှညျ့ထားသျောလညျး အောငျဆနျးပာုသာ တှငျနပေါတော့သညျ။ ထိနျလငျးသညျ ဇာတာဖှဲ့သူပေးသောနာမညျမြှာသာ ဖွဈသညျ။ အခြို့ ထငျနသေကဲ့သို့ ငယျနာမညျ မပာုတျပါ ။
မညျသညျ့အခါမြှ ထိနျလငျးပာု မချေါခဲ့ကွပါ။ ကြှနျတျောနှငျ့ အောငျဆနျး မှေးဖှားခဲ့သော အိမျကွီးသညျ မရှိတော့ပါ ။ ရှေးအိမျကွီးဖွဈ၍ ကြှနျတျောတို့ ဘေးလကျထကျက တညျဆောကျခဲ့ခွငျးဖွဈသညျပာုပွောကွပါသညျ။ ယခု နတျမောကျ၌ရှိသောအိမျသညျ အောငျဆနျးမှေးပွီးနောကျ နှဈနှဈလောကျရှိမှ ပွောငျးရှနေ့ထေိုငျသောအိမျဖွဈပါသညျ။ ကြှနျတျောတို့ ဘေးဦးရှနေီသညျ နတျမောကျမွို့ သူကွီးဖွဈ၍ ကြှနျတျောတို့အဖိုးပာု ရေးသားပွောဆိုနကွေသော ဦးမငျးရောငျ ချေါ ရှလေရောငျသညျ ဘေးမကွီး မယျစိုး၏ ၊ တူ ၊ အဖှား မယျသူဇာ၏ မောငျတဝမျးကှဲဖွဈပါသညျ ။
ကြှနျတျောတို့ ဘေးဘိုးဘီဘငျမြားသညျ အလောငျးဘုရား၏ ရဲဘေျော ခွောကျကြိပျရှဈ အပါအဝငျ ဝငျးမငျးကွီး ဦးမွ(ဦးမွတျ) မှ ဆငျးသကျကွသညျပာု လူကွီးသူမမြား ပွောဆိုသံ ကွားဘူးပါသညျ။ အောငျဆနျးသညျ နာမညျနှငျ့လိုကျအောငျ ဆနျး သူဖွဈပါသညျ။ အမေးအမွနျးထူ၍ လူကွီးတှပွေနျမဖွနေိုငျသညျ့ မေးခှနျးမြားကို မေးလေ့ ရှိပါသညျ ၊ မိုးတှငျး ဆောငျးတှငျးပာု ချေါကွသျောလညျး နှရောသီကို အဘယျ့ ကွောငျ့ နှတှေငျးပာု မချေါကွသလဲပာု မေးရာ လူကွီးမြားသညျ ပွနျ၍ မဖွနေိုငျဘဲ ရယျနကွေရပါသညျ။ ညီအဈကိုတဝမျးကှဲ ရှိသညျလညျး ဘာကွောငျ့ လငျမယား တဝမျးကှဲမရှိသလဲ မေးပွနျရာ လူကွီးမြားသညျ ယခငျက ကဲ့သို့ပငျ ပွနျမဖွနေိုငျဘဲ ရယျနကွေရပါသညျ။ အမေးအမွနျးထူသလောကျ အောငျဆနျးသညျ စဉျးစားတှေးတော ငေးမော နတေတျပါသညျ။
အငယျဆုံးဖွဈသညျ့အတိုငျး မိဘနှဈပါးကသာမက အဈကို အဈမမြားကပါ အလိုလိုကျကွသညျဖွဈရာ အောငျဆနျးသညျ ကလေးဆိုးကွီးကဲ့သို့ ဖွဈနပေါသညျ။ လိုခငျြသညျကို မရမနေ ငိုယို တောငျးဆိုတတျပါသညျ။ ရလညျးရပါသညျ ကွီးလာသညျ့တိုငျအောငျ မိမိပွောလိုရာ စှပျ၍ ပွောတတျခွငျး လုပျလိုရာကို စှပျလုပျတတျခွငျးတို့သညျ ငယျစဉျက အလိုလိုကျခံခဲ့ရခွငျးကွောငျ့ ဖွဈသညျပာု ထငျပါသညျ။ မှတျခကျြ ။ တခြိနျက မိတျဆှတေယောကျက ကြှနျတျောတို့ ဗိုလျခြုပျနဲ့ ပတျသကျပွီး သုံးသပျကွညျ့ကွတယျ။ ဗိုလျခြုပျပာာ မိမိပွောလိုရာ လုပျလိုရာကို စှပျပွော စှပျလုပျတတျတယျ ။
ဒါပာာ… အသကျ ငယျငယျရှယျရှယျနဲ့ အာဏာရလို့ ရယျလို့ သုံးသပျမိကွတယျ ပာု.. ကြှနျတျောကို ပွောပါသညျ။ ကြှနျတျောက ဒါတငျ မကဘူး ဗိုလျခြုပျပာာ မှေးကထဲက အလိုလိုကျခံခဲ့ရတယျ ပွောရာ ထိုမိတျဆှကေ ကြှနျတျောတို့ အဲဒါကို သိလဲမသိခဲ့ဘူး။ ထညျ့လဲမသုံးသပျမိခဲ့ဘူး ပာု ပွနျပွောပါသညျ။ စိတျဘကျဆိုငျရာ ပါရဂူမြား၏အဆိုအရ လူတယောကျ၏ စိတျဓာတျသညျ မိမိ၏ ဘဝပေးအတိုငျး ဖွဈတတျသညျ။ ဥပမာ လူတယောကျသညျ ငယျစဉျက ဆိုးသောမိဘမြား၏ နှိပျစကျခွငျးကိုသျော ၄ငျး အခွားသူမြား၏ နှိပျစကျခွငျးကိုသျော ၄ငျး ခံခဲ့ရလြှငျ ကွီးလာသောအခါ မယုံသင်ျကာဖွဈတတျခွငျး ကွောကျရှံ့ တတျခွငျးတို့ ဖွဈတတျပါသညျ။
တနညျးအားဖွငျ့ ဆိုလြှငျ ထိုပုဂ်ဂိုလျ မြိုးတှငျ အရူံးပေးတတျသော စိတျဓာတျ မြိုးဝငျနတေတျ ပါသညျ။ ထိုပုဂ်ဂိုလျမြိုးသညျ မိမိနိုငျလှညျ့ကွုံလာသောအခါ ရကျရကျစကျစကျ ပွုကငျြ့တတျသညျ ငယျစဉျက အလိုလိုကျခံခဲ့ရပွီး မိမိလုပျလိုရာ လုပျခှငျ့ရခဲ့လြှငျ ကွီးပွငျးလာသညျ့အခါ မိမိလုပျခငျြသညျ့အတိုငျး လုပျ ဝံ့သညျ။ လုပျတတျသညျ တနညျးအား ဖွငျ့ဆိုလြှငျ ထို ပုဂ်ဂိုလျမြိုးတှငျ မိမိကိုယျ မိမိ ယုံကွညျ့ကိုးစားမူ ရှိတတျသညျ။ ထိုပုဂ်ဂိုလျမြိုးသညျ ရနျသူကို အထငျသေးတတျသဖွငျ့ နောကျဆုံး၌ မိမိပငျ ခံရတတျသညျ။ နိုငျငံရေးခေါငျးဆောငျမြား၏ စိတျနသေဘောထားနှငျ့ ပတျသကျ၍ သုံးသပျလိုပါက ကလေးဘဝက နထေိုငျခဲ့ရပုံကိုပါ ထညျ့သှငျးစဉျးစားလြှငျ မမှားနိုငျပာု ကြှနျတျောယုံကွညျ့ပါသညျ။ အလိုလိုကျခံရသျောလညျး အောငျဆနျးမှာ မတရားလုပျခငျြသညျ့စိတျ မတရားအခှငျ့အရေး လိုခငျြသညျ့စိတျဓာတျမြိုးမရှိပါ ။
မိမိကိုယျကိုမိမိ ယုံကွညျသူဖွဈသညျ့အတိုငျး သူမြားအား မနာလိုသညျ့စိတျ မရှိပါ မိမိထကျ ကွောသှားမညျကို စိုးသညျ့အတှကျ သူမြားအား ခွထေိုးလိုသညျ့ စိတျမြိုးလညျး အလဉျြးမရှိပါ အောငျဆနျးနှငျ့ အခြို့နိုငျငံရေးခေါငျးဆောငျမြား ကှာခွားခွငျးသညျ ထိုစိတျဓာတျ အခွခေံကွောငျ့ပငျ ဖွဈသညျပာု ကြှနျတျောထငျပါသညျ။ အောငျဆနျးသညျ အလှနျရိုးသား၍ စားခငျြလြှငျ စားခငျြသညျ။ လိုခငျြလြှငျ လိုခငျြသညျ။ ကွောကျလြှငျ ကွောကျသညျစသညျဖွငျ့ ဖှငျ့ပာဝနျခံတတျပါသညျ။ မညျ့သညျ့အခါမှ လိမျမပွောတတျပါ။ ကြှနျတျောတို့ငယျစဉျက နတျမောကျဆှမျးကွီးလောငျးအသငျးက ကွီးမူး၍ ဝါတှငျး၌ အပတျစဉျ အိုစညျဗုံမောငျးဖွငျ့ အလှူခံထှကျပါသညျ။ လူတယောကျက ဖိုးသူတျောအရုပျကွီးထဲ ဝငျပွီး ကပါသညျ ထိုအရုပျကွီးကို အောငျဆနျး အလှနျကွောကျပါသညျ ။
အရုပျကို ကွောကျရကောငျးလား ပာု… ဖခငျက ဆူပူပွဈတငျသောအခါ ဖငျခေါငျးထဲသှငျးထား ဘယျ့နဲ့လုပျမလဲဗြာ့ပာု ပွနျဖွပေါသညျ။ ခေါငျးတုနျတုနျ လညျတုနျတုနျ ဖွဈနသေော မယျရှမေယျဆိုသညျ့ အမယျကွီးကိုလညျး သူကွောကျ၍ ကွောကျကွောငျးကိုလညျး သူဝနျခံပါသညျ။ ညအိပျလြှငျ မိခငျကို ဖကျအိပျလရှေိ့၍ မိခငျကို သူဘကျသို့ အမွဲလှညျ့အိပျစခေငျြသညျ။ အိမျနားရှိ ကာကာ ဆိုငျသို့လညျး သူမသှားရဲပါ။ တနေ၌ ကာကာ ဆိုငျသို့သှား၍ ဘီ- ဒီ ဆေးလိပျမြားဝယျပွီးလြှငျ ခြိုးကွညျ့ပါသညျ။ မိခငျသိသောအခါ ကလေးအား ဆေးလိပျရောငျးလိုကျသော (ကုလား) ထံ သှား၍ ဆူပူပွဈတငျပါသညျ။
ဆိုငျရှငျ ကာကာ က မိခငျကိုတောငျးပနျ၍ အောငျဆနျးဘကျလှညျ့ကာ နောကျတခါလာရငျ ဘနျဘူးပေးမယျ ပာု ပွောလိုကျရာ အောငျဆနျးက ဘနျဘူးပေးမယျဆိုတာ ဘာလဲ ပာု မိခငျကို မေးပါသညျ။ မိခငျက ဘနျဘူးပေးမယျဆိုတာ ရိုကျမယျလို့ပွောတာ ပာု ပွောလိုကျရာ အောငျဆနျးသညျ ထိုနမှေ့စ၍ ကာကာ ဆိုငျသို့ မသှားတော့ပေ ။
နမေကောငျးလြှငျ ပိုကျဆံပေးမှ ဆေးသောကျမညျပာု အကွပျကိုငျတတျသဖွငျ့ အောငျဆနျးသညျ နမေကောငျးတိုငျး မိခငျထံမှ ငှဒေင်ျဂါး လေး ငါးဆယျ ရပါသညျ (ထိုခတျေက ငှစေက်ကူ ပျေါသေးပာနျမတူပါ နတျမောကျ၌ တဆိုငျတညျးသာရှိသော ကာကာ ဆိုငျသို့ မသှားရဲသဖွငျ့သူလိုခငျြသညျ့ ပစ်စညျးမြားကို ကြှနျတျောက ဝယျပေးရပါသညျ ကြှနျတျောလိုခငျြသညျ့တို့ကိုလညျး သူငှဖွေငျ့ပငျ ဝယျခှငျ့ပေးပါသညျ။ ညီအဈကိုရနျဖွဈသောအခါ သူငှေ ပွနျပေးရနျ တောငျးတတျပါသညျ။ မိခငျက မငျး အစက ဘာလို့ ပေးသလဲ ပာု မေးသောအခါ …. အို…. သူက ညီအကိုခငျြးဘဲကှာ ဘာ ညာ နဲ့ ပွောတာကိုးဗြာ့ပာု ပွနျဖွသေဖွငျ့ ကြှနျတျောတို့ ရယျကွရပါသညျ ။
အောငျဆနျးသညျ မညျသညျ့အခါမှ လုပျကွံ၍ လညျဆညျ၍ မပွောတတျပါ ပေးခဲ့လြှငျ ပေးခဲ့သညျ လုပျခဲ့လြှငျ လုပျခဲ့သညျပာု ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး ဖှငျ့ပာဝနျခံတတျပါသညျ။ ကြှနျတျောတို့ မိခငျသညျ အလှနျ ပညာလိုလားရကား ကြှနျတျောတို့ ငါးနှဈခွောကျနှဈအရှယျ ရောကျလြှငျ ကြောငျးထားပါသညျ။ အောငျဆနျးသညျ ကြောငျးနရေမှာ ကွောကျသဖွငျ့ အမနမှေ နမေယျပာု မိခငျကို ပွောပါသညျ။ (ကြှနျတျောတို့မိခငျကို ကြှနျတျောတို့က အမ ပာု ချေါကွပါသညျ) ထှေးဆုံးသားကလေးကို အလှနျခဈြခငျသော မိခငျကလညျး အောငျဆနျးကို ကြောငျးမပို့ ရကျဘဲ ခှငျ့လှတျထားရပါသညျ။
ကြှနျတျောတို့ ၁၁နှဈသားအရှယျ ရောကျသောအခါ ရှငျပွု၍ ကိုရငျ ဝတျပါသညျ။ ခုနှဈနှဈကြျော ရှဈနှဈသားရှိနပွေီဖွဈသော အောငျဆနျးသညျ ကြောငျးမနသေေးသျောလညျး ကြှနျတျောထံ နစေ့ဉျလာပါသညျ။ ထို့သိုလာရငျး ကိုရငျ ဝတျခငျြစိတျပေါကျလာသဖွငျ့ ကိုရငျဝတျပေးရနျ မိခငျကို ပူဆာပါသညျ ခကျြကောငျးကိုယူတတျသော မိခငျက ကိုရငျဝတျတယျဆိုတာ လှယျတာ မပာုတျဖူးကှ ၊ စာတတျမှ ဝတျလို့ ရတာ မငျးလို စာမတတျတဲ့လူက ကိုရငျဝတျလို့ ဘယျဖွဈမလဲ ပာု ဆှ ပေးလိုကျပါသညျ ။ ဒီလိုလား ၊ ဒီလိုဆို ကြောငျးနမေယျ ပာု ပွောပွီး အောငျဆနျးသညျ ထိုအခြိနျမှစ၍ ကြောငျးနပေါတော့သညျ ။ (မှတျခကျြ ။ ၁၉၃၂ – ၃၃ ခုကောလိပျကြောငျးရောကျစ ပထမနှဈ ၌ လညျး အောငျဆနျးသညျ သင်ျကနျးဝတျ၍ အီတာလီယံ ဘုနျးတျောကွီး ဦးလောကနထနှငျ့အတူလိုကျကာ သာသနာပွုလိုစိတျ ဖွဈပျေါ လာသဖွငျ့ မိခငျထံ ခှငျ့တောငျးဘူးပါသညျ မိခငျက ခှငျ့မပွုသဖွငျ့ မလိုကျဖွဈခဲ့ပေ) ဤ သို့ဖွငျ့ အောငျဆနျးသညျ နတျမောကျ ရှိ ဒီပင်ျကရာကြောငျးချေါ ဦးသောဘိတကြောငျးသားဖွဈလာပါသညျ ဦးသောဘိတကြောငျးသညျ ဘုနျးကွီးကြောငျးဖွဈသျောလညျး အတနျးကြောငျးဖွဈပါသညျ ထိုခတျေက ထိုကြောငျးမြိုးကို လောကဓာတျကြောငျးပာု ချေါ ကွပါသညျ ။
အောငျသနျး၏ အောငျဆနျး စာအုပျမှ ။